အောင်ဇော်| October 31, 2012 | Hits:8,971
ရခိုင်ပြည်နယ် အစိုးရ လူမှန်နေရာမှန် ဖြစ်လာနိုင်မလားဒီမိုကရေစီနိုင်ငံများရှိ ပြင်ညီတာဝန်ခံမူ (၃)ကလေးများနဲ့ အားကစားအရက် အတုတွေ တယ်များရက္ခိုင့်တပ်မတော်
47 Responses LeaveaReply Cancel reply
မောင်ကြီး October 31, 2012 - 6:06 pm ရခိုင်ပြည်နယ်က အကြမ်းဖက်မှုတွေရဲ့ နောက်ကွယ်မှာ ဘယ်သူပဲရှိရှိ ဝမ်းနည်းစရာကောင်းတာကတော့ အခုအချိန်မှာ သာမန်မြန်မာပြည်သူ အတော်များများလည်း ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေ ယူဆခဲ့တဲ့အတိုင်း လိုက်ယူဆနေကြတာပါပဲ။
Reply မောင်ကျော် October 31, 2012 - 9:12 pm မှန်တယ်။ ထောက်ခံတယ်။
Reply ဘကြီး November 8, 2012 - 8:57 pm သူ့ဟာသူ ပဲကြီးဟင်း အသောက်များတာ ဘာဆိုင်လို့ဒီဘက် ကို မစင်လာစွန့်သလဲ မစင်လာပုံသလဲ အခုခောတ် လုပ်စားရတာ လုစားနေရတာ ကြလို့ အဲဒါ မသိပဲ အားတိုင်းမွေး နေတယ်။
Reply mr TM October 31, 2012 - 7:25 pm ကိုအောင်ဇော်ရဲ့ဆောင်းပါးကိုမြန်မာတနိုင်ငံလုံးကပြည်သူတွေဖတ်မိပါစေလို့စုတောင်းပါတယ်။ရခိုင်ပြည်ကပြည်သူတွေပိုပြီးနားလယ်ပါစေ၊စဉ်းစားနိုင်ကြပါစေလို့စုမွန်ကောင်းတောင်းလိုက်ပါတယ်၊တနိုင်ငံလုးံအေးချမ်းပါစေ။
Reply Ko Oo October 31, 2012 - 10:38 pm သို့……ကိုအောင်ဇော်…ဒီဆောင်းပါလေးကိုကြည့်ရင်အပေါ်ယံသဘောကတော့ဟုတ်သလိုလိုပါဘဲ။ဒါပေမဲ့မြန်မာတ္ဗေရဲ့ရင်ထဲကနှစ်ပေါင်းများစ္ဗာခံစားခဲ့ရတဲ့ခံစ်းချက်ကိုလည်းထည့်စဉ်းစားဖို့လိုသလို ကိုယ်တနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့လည်းထည့်တ္ဗက်ဖို့လိုပါတယ်။မြန်မာလူမျိုးတ္ဗေရဲ့ရင်ထဲကိုနာကျင်သ္ဗားစေခဲ့တဲ့ဇာတ်လမ်းရဲ့အစကိုလည်းထည့်စဉ်းစားဖို့လိုပါတယ်။ဒီလူမျိုးတ္ဗေဟာမြန်မာလူမျိုးတ္ဗေကိုမထီမဲ့မြင်ပြုနေတာလည်းကြာပြီ တဖြည်းဖြည်းနဲ့လည်းအတင့်ရဲလာတယ် ပြီးတော့ လူမျိုးရေးဝါးမျိုမူ့နဲ့ စီမံကိန်းရှိရှိနဲ့လုပ်ဆောင်နေတဲ့ဘာသာရေးသ္ဗပ်သ္ဗင်းမူ့တ္ဗေဟာ ကိုယ့်နိုင်ငံကိုယ့်လူမျိုးအတ္ဗက်ဘယ်လောက်အန္တရာယ်ရှိလည်းဆိုတာလည်းထည့်တ္ဗက်အုံးမှပေါ့ဗျာ။အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတ္ဗေနဲ့လည်းဆင်ကြည့်ပါအုံး ကိုယ့်လူမျိုးတ္ဗေအဖိနှိပ်ခံနေရတာကြီးပါပဲ။ဒါတ္ဗေဟာစစ်အာဏာရှင်ရဲ့ဆိုးကျိုးတရားတ္ဗေပါပဲ။ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ကျိုးအတ္ဗက်ဆိုရင် တိုင်းပြည်ကိုပါရောင်းစားရဲတဲ့စစ်အာဏာရှင်တ္ဗေကြောင့်ဒီအကျိုးတရားတ္ဗေဖြစ်ခဲ့ရတာပါ။အခုချိန်မှာ ရခိုင်လူမျိုးတ္ဗေရဲ့ ရင်ထဲကခံစားချက်ပေါက်က္ဗဲမူ့ကိုတော့တဖက်သတ်အပြစ်မမြင်ကြပါနဲ့လို့မေတ္တာရပ်ခံပါရစေ……။
Reply Thu Htut October 31, 2012 - 11:08 pm Patriotism is just like salt (Ko Ko Gyi), now too salty and spoiled the dish (civilization). But second disputes clearly show the ugly men.
Reply Myant Linn November 1, 2012 - 12:42 am ကျုပ် အထင်ကတော့ ပထမဆုံးက ပြည်ပအခြေစိုက် မြန်မာသတင်းဌာနတွေနဲ့ နိုင်ငံတကာ သတင်းဌာနတွေက ရခိုင်အမျိုးတွေရဲ့ သဘောထားကို လုံးဝဂရုမစိုက်ဘဲ စစ်အစိုးရလုပ်ရပ်တွေကို မနှစ်သက်တာတစ်ခုတည်းနဲ့ မြန်မာပြည်က တဆင့်ထွက်သွားတဲ့ ဘင်္ဂလီအုပ်စုတစ်ခုရဲ့ လူ့အခွင့်ရေး အရေခြုံပြီး ရိုဟင်ဂျာဆိုတဲ့ လူမျိုးစုနာမည်နဲ့ နယ်မြေပိုင်ဆိုင်ရေး ကြိုးစားမှုတွေကို အလိမ်ခံပြီး လက်ခံ ဖော်ပြလာကြတာပါပဲ။ အဲဒါကို ရခိုင်အမျိုးသားအများစုက အိမ်ရှင်က ဧသည့်ဖြစ်ရမည့်ကိန်းဆိုက်နေတယ်ဆိုပြီး ခံပြင်းနေကြတယ်။ ဒါကြောင့် ဒီကိစ္စမှာ ပြည်ပအခြေစိုက် သတင်းဌာနတွေ လူ့အခွင့်အရေး တိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့အဖွဲ့တွေ (လူ့အခွင့်အရေးတိုက်ပွဲဝင်တာကို အပြစ်ပြောတာ မဟုတ်ပါဘူး၊ ဘက်နှစ်ဘက်စလုံးကို ထည့်မတွက်ပဲ gaffe နမော်နမဲ့ တိုက်ပွဲဝင်မှုတွေကို ဆိုလိုတာပါ) ကလည်း သွယ်ဝိုက်တဲ့နည်းနဲ့ ဒီပဋိပက္ခရဲ့ လုံဆော်ပေးတဲ့နေရာမှာ ပါနေတယ်။ ရခိုင်အမျိုးသားတွေက အနောက်တံခါးကို ထိမ်းသိမ်းသူတွေဆိုတာကို ကျနော့်အထင်က အဲဒီလို ၀င်ရောက်လာတဲ့ ဘင်္ဂလီ အမျိုးသားတွေကို မြန်မာပြည်အနှံ့ ဘယ်နေရာမှ သွားခွင့်မရှိဘဲ ရခိုင်ပြည်နယ်မှာပဲ ၀န်ထုတ်ဝန်ပိုးကြီးတစ်ခုကို ထမ်းထားရသလို့ ဖြစ်နေတယ်လို့ ထင်တယ်။ အဲလူတွေကို ဘယ်ဥပဒေနဲ့ပဲ ဖြစ်ဖြစ် မြန်မာပြည်သားအခွင့်အရေး ပေးလိုက်ရင် ရခိုင်ပြည်နယ်တစ်ခုတည်းမှာပဲ စုပုံမထားဘဲ သူတို့ကို မြန်မာပြည်အနှံ့ ဘယ်နေရာပဲသွားသွား လွတ်လပ်စွာ သွားလာ အခြေချနေထိုင်ဖို့ အခွင့်အရေးပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ဒါမှ နိုင်ငံတကာရဲ့ စံချိန်စံညွန်းနဲ့ ညီပြီ၊ ရခိုင်အမျိုးသားတွေကို မတရား ၀န်ထုပ်ဝန်ပိုးကို ထမ်းစေရာ မရောက်စေပဲ မြန်မာပြည်အတွက် တရားမျှတပါလိမ့်မယ်။ဒီလူတွေကို ခရီးသွားခွင့်တောင် မရှိအောင် လုပ်ထားတာ ရခိုင်အမျိုးသားတွေ မဟုတ်ပါဘူး။ သက်ဆိုင်ရာ အာဏာပိုင်တွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ပြီးတော့ အဲဒီလူတွေကို သနားတာနဲ့ ဒေသအာဏာပိုင်တွေနဲ့ပေါင်းပြီး ဆယ်စုနှစ်နဲ့ချီ အလုပ်လုပ်သွားကြတဲ့ နိုင်ငံတကာ NGO (AZG, UN လက်အောက်ခံ အဖွဲ့) တွေပါပဲ။ အဲဒီအဖွဲ့တွေကို ရခိုင်အမျိုးသားတွေက တံခါးမခေါက်ပဲ အတင်းဝင်လာတဲ့ မကြိုဆိုသင့်တဲ့ ဧသည့်တွေ အဖြစ်မြင်နေကြပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ အဲဒီအဖွဲ့တွေက ဒေသခံ ရခိုင်ပြည်သူတွေအတွက် ကျိုးမရှိသလို သူတို့ လုပ်ပုံကိုင်ပုံ သွားလာပုံတွေကို အိမ်ရှင်ကို လုံးဝ ဂရုမစိုက်တဲ့ ပုံတွေ ပေါက်နေလို့ပါပဲ။ ဒါပေမယ် အဲဒါတွေဟာ အဲဒီအဖွဲ့ကြီးရဲ့ မူလရည်ရွယ်ချက် ဟုတ်ချင်မှ ဟုတ်မှာပါ။ ဒေသ အဖွဲ့ခွဲက သက်ဆိုင်ရာဒေသမှာ အကောင်အထည်ဖော်သူတွေရဲ့ ချွတ်ယွင်းချက်များ ဖြစ်ကောင်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
Reply Thandar November 1, 2012 - 1:23 am Very sad to see all these fatal clashes between the two communal groups.
Reply ကြီးတော် November 1, 2012 - 7:46 am တိုင်းရင်းသားအစ္စလမ်ဘာသာဝင် ကမန်လူမျိုးတွေက ဘာဖြစ်လို့ရောပြီးထွက်ပြေးကြရတာလဲ။ ရခိုင်တွေက ဘင်္ဂါလီဖြစ်ဖြစ်၊ကမန်တိုင်းရင်းသားဖြစ်ဖြစ် မူဆလင်မှန်မျှ ဒို့ရန်သူလို့ကြွေးကြော်နေကြလို့လား။ ဒါမှမဟုတ် ကမန်လူမျိုးတွေက လူမျိုးရေးကျုးကျော်ရန်စမှုကို ဘာသာတူတွေဘက်ကနာပြီး ဘာသာရေးပြဿနာအသွင်ဆောင်ချင်လို့ဒီလိုလုပ်တာလား။
Reply Nyein November 1, 2012 - 8:31 am Every body told, needs PEACE – thinks PEACE and Good for other people, very good comments but why can’t say clearly to solve these problems. You all think they are weak & poor people also you all knew they coming from other place and they needs our land, shared our food & made many problem in our country. We didn’t think about Muslim or other religion, many religion & many races are living in our country long long ago especially many many Bali (Muslim temple) in our country we never made the problem. If they living quietly & peaceful mean no problems came out.
Reply swe htwe November 2, 2012 - 12:32 am that’s right .
Reply FOX November 1, 2012 - 9:43 am ကိုအောင်ဇော် ဆောင်းပါးလေးကိုသဘောကျပါတယ်… ရိုဟင်ဂျာဆိုတာ တရုတ်လောက်တော့သြဇာမရှိသေးပါဘူး… ဒါကိုရခိုင်တွေက သူတို့ကပဲနိုင်ငံတော်အတွက်အကာအကွယ်ပေးနေတယ်ဆိုပြီးဟုတ်လှပြီမှတ်နေတာ… ရိုဟင်ဂျာဆိုတာလက်တဆုပ်စာပါ…တရုတ်ကဖြင့်အချက်အချာနေရာအတော်များများမှာတောင်ခြေဆန့်ပြီးနေပြီ… ၀မ်းနည်းစရာကောင်းလေစွရခိုင်အမျိုးသားတို့… မင်းတို့ဒေသဆိုတာဆင်းရဲမှုမှာဒုတိယလိုက်နေတာ အဲ့ဒါကမ္ဘာ့နိုင်ငံရဲ့အဆင်းရဲဆုံးတိုင်းပြည်မှာအပါအ၀င်ဖြစ်တဲ့နိုင်ငံမှာနော်…အဲ့ဒီတော့ နိုင်ငံတုိုးတက်ဖို့ကိုပဲ အဓိကထားကြပါလို့တုိုက်တွန်းချင်ပါတယ်…
Reply kyawmintun November 3, 2012 - 3:18 pm ဒီကိစ္စမှာရခိုင်လူမျိုးတွေဟာနိုင်တော်ကာကွယ်တဲ့နေရာမှာတကယ့်ကိုတာဝန်ကျေတယ်။ ခင်ဗျားမှာနိုင်ငံရေးခံယူချက်သိပ်ကိုအားနည်းနေသလိုပဲ။
Reply myaykhway November 8, 2012 - 4:48 am Feel sorry for rakhine people?If so,use your mouth to help them.Chinese are everywhere in the world.They work hard.they dont f… to local people.Burmese can live with chinese forever.Not with Bingali.Mind your self.
Reply Than Aung November 1, 2012 - 9:44 am “Buddhism, the greatest religion in history because it has had the smallest element of persecution.” (Bertrand Russell, Nobel Prize winner, The British mathematician, philosopher)
Reply Min Gao November 2, 2012 - 11:47 am This simply isa“Cause and Effect” matter. AsaBuddhist, taught to love our neighbors but not to kill the labelled infidels. We are grateful to Bertrand Russell that he had an attempt to explain it. Unfortunately we can not have many Bertrand Russell so it is not surprisedalot may share such this one sided sight. The 20th century’ great philosopher would regret that our residents under Buddha’ umbrella can no longer live in peace and forced to use the counter acts to defend their sole rights.
Reply ရခိုင် November 1, 2012 - 9:51 am ဘင်္ဂလားဒေရှ့် နိုင်ငံရဲ့ လူဦးရေပေါက်ကွဲနေတာကို ဘယ်နိုင်ငံမှမမြင်ဘူး။ ရခိုင်လူမျိုးကို အကြမ်းဖက်သမားသဖွယ် အရေးအသား
Reply Ko Chit November 1, 2012 - 12:46 pm Kill the invaders who are not our national.
Reply ukaungkalay November 1, 2012 - 5:09 pm ဘင်္ဂလီတွေမြန်မာပြည်မှာလူဦးရေအရရောစီပွားရေးအရရောတဖြည်းဖြည်းလွှမ်မိုးလာတာပြီးတော့သူတို့ ဘာသာပြန့် ပွားထွန်းကားဖို့ နည်းမျိုးစုံသုံးနေတာကိုအောင်ဇော်မသိဖူးထင်တယ်မြန်မာပြည်မှာသူ့ အမျိုးတွေမရှိလို့ လား၊ဒါမှမဟုတ်ကုလားထောက်ပံ့ကြေးနဲ့ စားနေရလို့ လားကိုယ့် ပြည်ကိုယ့်ဘာသာ၊ကိုယ့်အမျိုးပျောက်မှာမပူဘဲကုလားဘက်လိုက်ရေးတာဖတ်ရတော့စိတ်ပျက်မိတယ်။
ReplyှုMr.Nar November 1, 2012 - 11:27 pm ကိုအောင်ဇော် ဆိုတဲ့ အယ်ဒီတာကြီးရေ….ဆောင်းပါးကကောင်းသလိုလိုတော့ရှိပါတယ်….
Reply Kachin November 8, 2012 - 3:06 am Dont be knowing everything like stupid” I m Kachin Christain’ will explain youabout your Burmese government, your millitary junta was muder at many ethnics lands. Rape, burn village, shell in to every where and rub thing from civilianc. Distroy our Christain Church, mass staft alot lot lot lot’s of to tell you how their bad thing but too tired for tell your own burmese bad. Stop talking just one side of nationallty bad. Maybe you are horrible than rohingya. just stoped, bring the peace, do not bring ??????????
Reply pps12345 November 1, 2012 - 11:41 pm ဘယ်သူ့ လက်ချက်မှ မဟုတ်ပါဘူး။ အာဏာရှင်တွေ ကိုးကွယ်တဲ့ ဘုန်းကြီး တွေ လက်ချက်ပါ။ ဒါမှ သူတို့ ဆွမ်းဘုန်း အဆင်ပြေမှာလေ။ တရုတ်ပြည်က ဝင်လာပြီး မန္တလေး တမြို့လုံး သိမ်းပိုက်ထားတဲ့ တရုတ်တွေ၊ တရုတ်ပြည်မှာမွေးပြီး ရှမ်းပြည်မှာ လက်နက်ကိုင်နေတဲ့လူတွေ၊ တရုတ်ပြည်မှာ မွေးပြီး လွှတ်တော် ထဲ ရောက်နေတဲ့ လူတွေကျတော့ ဘာမှ မပြောဘဲနဲ့။ ဗိုလ်ချုပ်လို ဘဲ ပြောချင်တယ်။ နိုင်ငံရေးကို ဘာသာရေး နှင့် မရောပါနှင့်လို့။ ဘုန်းဘုန်းတို့ နိုင်ငံရေး လုပ်ချင်တယ် ဆိုရင်လည်း ကုလားကိုဆော်သလို တရုတ်တွေ ကပ်တဲ့ဆွမ်းကိုလည်း မစားပါနဲ့လို့။ ကျွန်တော် ခေတ်ပညာတတ် ဗုဒ္ဒဘာသာဝင်တစ်ဦးပါ။
Reply katpiya November 8, 2012 - 5:04 am Educated man without knowledge?Withapiece of paper from mm uni?Congratulation.
Reply VCN November 2, 2012 - 2:57 pm Fox ရေ မင်း မြန်မာစစ်စစ်ဟုတ်ပါတယ်နော် ရခိုင်တွေကိုအဲလိုပြောရအောင်မင်းကဘာအဆင့်ရှိလို့လဲ အဲတာဆိုမင်းသွားပြီးကာကွယ်ပါ့လား ရခိုင်လဲမြန်မာပြည်မြေပုံထဲမှာပါတာဘဲ မျှမျှတတတော့ပြောပေါ့ကွာ တရုတ်ကအမြတ်ရရင်ပြီးပြီကွ ကုလားကလူလဲယူ ငွေလဲယူမဲ့အပြင် တိုင်းပြည်ရော လူမျိုးပါ မ,သွားမှာ အဲဒိတော့မှ မင်းခွက်ဆွဲနေရမယ် နားလည်လား
Reply Thet Tun November 2, 2012 - 7:28 pm်မြန်မာပြည်သူ အတော်များများလည်း ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေ ယူဆခဲ့တဲ့အတိုင်း “မြန်မာပြည်ရဲ့ အန္တရာယ်အရှိဆုံး နယ်စပ်ဒေသက ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံနဲ့ နယ်နမိတ်ခြင်း ထိစပ်နေတဲ့ ဒေသလို့ယူဆနေကြတာပါပဲ။
Reply မင်းကြီးညို November 2, 2012 - 11:33 pm Myat Linn ရဲ့ကွန်မင့်ကို သဘောမတူဘူးဟေ့။ ဘယ့်နှယ်ဗျာ ဘင်္ဂါလီတွေကို တနိုင်ငံလုံးအနှံ့
Reply Blood of Aung Zay Ya November 3, 2012 - 12:21 am ဒီဆောင်းပါးရှင်ဟာ မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ တော်တော် အဆက်ပြတ်နေတယ် ဆိုတာ ကြည့်တာနဲ့သိသာပါတယ်။ ဒါမှမဟုတ်လည်း မူဆလင်တွေရဲ့ ဒေါ်လာထောင်ချောက်ထဲ ၀င်နေတာလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အဆိုးဆုံးကတော့ ရခိုင်တိုင်းရင်းသားတွေ ရဲ့ ခံစားချက်ကို အလေးမထားတာ မြန်မာလူမျိုးတယောက်အနေနဲ့ တော်တော် ရှက်ဖို့ကောင်းပါတယ်။ရှက်တက်ရင် ကိုယ့်မျက်ခွက်ကို ဓါးနဲ့တောင်လှီးသင့်နေပါပြီ။ကျွန်တော်ကတော့ ဘာဘဲ ဖြစ်ဖြစ် ဒီဆောင်ပါးကို အပြင်းအထန်ရှုံ့ချပါတယ်။ ရိုဟင်ဂျာ ဘဲခေါ်ခေါ် ဘင်္ဂဂါလီ ပဲခေါ်ခေါ် မူဆလင်က မူဆလင်ပါပဲ ။အကျင့်စရိုက်တွေက မင်းမဲ့စရိုက်တွေပါ။မြန်မာတိုင်းရင်းသားတွေနဲ့ စိတ်ဓာတ်ချင်းက မိုးနဲ့မြေလိုကွာပါတယ်။ သူတို့ကို တိုင်းရင်းသားအဖြစ်လက်ခံမယ်ဆိုရင် ကျွန်တော် က ရှေ့ဆုံးကနေ အသေခံပြီး သူတို့ကို တိုက်ထုတ်ပစ်မှာဘဲ။
Reply kyawmintun November 3, 2012 - 3:06 pm Same to you, bro
Reply San Shwe November 3, 2012 - 12:10 pm Ko Aung Zaw or any professional organization, Please try to build up the census data of Rakhine state (i.e. British colony time in 1824-1826, 1952, 1975 and current data) compared with birth rate of the whole country.
Reply Kyaw November 3, 2012 - 4:35 pm ခင်ဗျားတို့ သတင်းဌာနက ပြည်ပမှာအခြေစိုက်တာလား…..ပြည်တွင်းမှာအခြေစိုက်တာလား….ခင်ဗျားထက် သတိ ရှိလို့ မောင်းတောမှာ မိသားစုနဲ့ အသက်ရင်းပြီးအလုပ်လုပ်နေတာ…နောက်တခါ…အဲဒီလို မျိုးရေးရင် ခင်ဗျား ဘာကိုအခြေခံပြီးရေးတာလဲဆိုတာ ……..transparency ရှိအောင်ရေးပါ……
Reply johnslilver November 4, 2012 - 10:18 am ဒီဆောင်ပါးကိုဖတ်မိတဲ့အချိန်မှာ တော်တော်လေးကောင်းပါတယ်စိတ်ကပျက်ဖို့ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ကျတော်တို့ငယ်ငယ်တုန်းက တယောက်ကိုတယောက်အနိုင်ယူချင်ကြတော့ တယောက်ကိုယောက်စကားနိုင်လုကြတာပေါ့ အဲဒီအချိန်မှာ မနိုင်ရင်ဘာမှအပြစ်အရှိ ဖအေမအေတွေဝေါရောပါလာကြတယ်လည် နောက်ဆုံးကျတော်တို့အရွယ်တခုခုကိုရလာတဲ့အခါကြတော့ ကိုယ်တို့ရဲ့လုပ်ရပ်တွေကိုစဉ်စားမိရင် ဘာမှအသုံးမကျတဲ့လုပ်ရပ်တွေဆိုတာကို သိမြင်လာတာပေါ့နော်……….အဲလိုပဲ ဒီဆောင်ပါးရေးတဲ့ဆောင်ပါးရှင်က ကလေးကလားဆန်တာလား ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် ကမ်းမမြင်လမ်းမမြင် ဓနရာဂအားကြီးနေလို့လား အဲလိုမဟုတ်ရင် ဘယ်သူသေသေ ငတည်မသေရင်ပြီးရောဆိုတဲ့သဘောလား နောက်ဆုံးပြောချင်တာတခုကတော့ ကိုယ်ဟာလူသားတယောက်ပါဆိုတာကို သွားမမေ့ပါနဲ့ လူသားတယောက်ဖြစ်ရင် လူသားတယောက်မှာရှိသင့်ရှိတိုက်တဲ့ ကိုယ့်ကျင့်တရား(ethic)၊ ကိုယ်ချင်စတရား၊ အရှိကိုအရှိအတိုင်း အမှန်ကိုအမှန်တိုင်း ကုံကုံပြောရမယ်ဆိုရင် ပကတိအခြေအနေက သွယ်ဖယ်နေမယ်ဆိုလိုရှိရင် သင်ဟာတနေ့ လမ်းဘေးရောက်သွားပါလိမ့်မယ် အဲဒီအချိန်မှာ သင့်ရဲ့ဓနဆိုတဲ့အရာကလည်းဘဲ သင့်အတွက်ဘာတခုမှကယ်နိုင်တော့မှာမဟုတ်သလို သင့်ရဲ့လုပ်ရပ်တွေကို သေသေချာချာစဉ်စားသင့်ပါတယ် ပြီးရင်မှားသလား မှန်သလားပေါ့ မှားသွားရင်ဘာလုပ်သင့်…………..။
Reply God god November 4, 2012 - 2:35 pm နွားတံဆိပ်တွေပဲး. ဦးနှေက်နည်းနည်းသုံးပါဦး ကိုရွှေ ရခိုင်တို့
Reply ရွှေမျိုး November 4, 2012 - 3:02 pm ကိုရွှေကိုမျိုး ရခိုင်သားတို့ ကိုသတိ့ပေးချင်တယ်
Reply လူမှန် November 4, 2012 - 3:06 pm ကိုအောင်ဇော်က ဗမာလူမျိုးစစ်စစ်ပဲး
Reply ၈၈ November 4, 2012 - 3:12 pm ကိုမိုးသီးရဲ့စကားကိုသတိရမိပါတယ်
Reply မျိုးချစ် November 4, 2012 - 3:16 pm ပြည်တွင်းပြည်ပ သတင်းဌာနများ
Reply နမူနာ November 4, 2012 - 3:22 pm ကိုအောင်ဇော်ရေ ရင့်ကျပ်မူ့မရှိ့သေးသော
Reply True November 4, 2012 - 3:33 pm ဘယ်သူမဆိုကိုယ့်လူမျိုး ကိုယ့်ဘာသာ ကိုယ့်နိုင်ငံကိုချစ်ပါတယ်
Reply တိုးနိုင် November 4, 2012 - 3:58 pm ဧရာဝတီ. မှန်ပါသည်
Reply နိုးတူး November 4, 2012 - 4:08 pm ဒေဝါလီခံ. ခရစ်ယန်
Reply TM November 5, 2012 - 9:05 am နိုးတူး နှင့် တိုးနိုင်
Reply တိုးနိုင် November 5, 2012 - 4:50 pm TM ရေ. မူရင်းအမည် တိုးနိုင်ပါ
Reply TM November 6, 2012 - 12:12 am ဘယ်လိုစိတ်ကူးကြောင့် ကဗျာတိုနှစ်ခုကို နာမည်နှစ်မျိုးသုံး၍ မှတ်ချက်ပေး၇ပါသလဲ။
Reply lo ou November 6, 2012 - 8:18 pm ကွန်ုပ်ကတော့ ဘုမသိဘသိပါဘူး ဒါပေမဲ့ ဧရာဝတီကိုမေးချင်တာက ဧရာဝတီသတင်းဌာနဟာ ရိုဟင်ဂျာ (ဘင်္ဂလီ) သတင်းဌာနလား။ သို့ မဟုတ် ဗမာသတင်းဌာနလား အဲဒါပဲသိချင်ပါတယ်။ သတင်းတွေကို ဖတ်ပီးတော့ ကွန်မန်းပေးရတာ ခက်နေလို့ ပါ။
Reply တိုးနိုင်. နိုးတူး November 6, 2012 - 9:50 pm ပထမကဗျာနှင့် ဒုတိယကဗျာ ၁၀ မိနစ်ကွာပါသည်
Reply Soe Nyunt November 7, 2012 - 10:37 am I really suggest that You should read more political books.
Reply kopouk November 8, 2012 - 10:12 am အယ်ဒီတာ ဦးဇော် ခင်ဗျား.ဒီဆောင်းပါးကိုဖတ်ပြီး ၇လာတဲ့ အသိကတော့ ကျွန်တော့် တို့ အသုံး ချခံလိုက်၇မှန်းသိတော့တယ်.အဆက်အစပ်တွေကို ပြန်တွေးကြည့်မိတယ်. ပထမ သတင်းဈာမှာ တ၇ားဝင် ကုလားလို့ေ၇းတယ်.နောက်ပြန်ပြင်တယ်. ပြသနာကို ပြီးပြတ်အောင် မဖြေ၇ှင်းဘူး. တစ်ဆင့်ပီးတစ်ဆင့် ပို၇ှုပ်ထွေးလာအောင်လုပ်တယ်.လူထုကို ခံစားချက်တွေ ဖြစ်လောအောင် ဖန်တီးတယ်. ၇ဟန်း၇ှင်လူ သွေးဆူလာအောင်လုပ်တယ်.ဒေါါ်စုနဲ့ ပြည်သူကို သွေးကွဲအောင် ဖန်တီးတယ်.ပြီးတော့ မှ သမ္မတက ကယ်တင်၇ှင်နေ၇ာမှာ နေ၇ာယူတယ်.လူထုအကြိုက် လိုက်သယောင်နဲ့ အခြေအနေကို ပို၇ှုတ်ထွေးလာအောင်လုပ်တယ်.ထိန်းမနိုင် သိမ်းမ၇ ဖြစ်လာတဲ့ပုံပေါက်အောင် ဖန်တီးယူတယ်. အချိန်ကိုက်ကဘဲ ကြံဖွံ့က လွတ်တော် မှာ လှုတ်၇ှားလာတယ်.ပြီးတပ်တွေ ၇ခိုင်ထဲ ဆွဲသွင်းလိုက်တော့တာပါဘဲ.၇ခိုင်အေ၇းကို ခုတုံးလုပ်ပြီး တပ်ကိုနာမည်ကောင်းပြန်ယူတယ်.သဘောကတော့ဗျာ ပြည်တွင်းမှာ ၇ှိတဲ့ အဖွဲ့အစည်း အားလုံးကိုကွဲအောင် သတ်လျှုိ လိုက်တာပါဘဲ.အချိန်ကိုက်ဘဲ တပ်မတော် အင်အား၇ှိမ တိုင်းပြည်အင်အား၇ှိမည်ဆို တဲ့ ဆောင်ပုဒ်ကို တဟုန်ထိုးဖေါ်ပြလာတာ သတိထားလာမိတယ်.၈၈ က ကို၈ျင်မီကို ဦးတည် တိုက်ခိုက်လာတာကိုလဲ သတိပြုမိလာတယ်.ဒါတွေဟာ တိုက်ဆိုင်မှု တော့ မဟုတ်လောက်ဘူးလေ.